Voambolana - Wikipedia
Ny voambolana dia ny fitambaran' ny teny ampiasaina ao amin' ny fiteny iray, na ny na sampam-pahalalana andinihana izany.
Ny teôria momba ny fiteny amin' ny ankapobeny dia mihevitra ny fitenin' olombelona ho misy lafiny roa: ny voambolana, indrindra ny lisitry ny teny ao amin' ny fiteny iray (ny tahirin-teniny); sy ny fitsipi-pitenenana (na fitsipi-teny), rafi-pitsipika izay ahafahana ny manambatra ireo teny ireo ho lasa fehezanteny misy heviny. Ny voambolana koa dia heverina fa misy hasinteny mifatotra, izay tsy afaka mampiasaina irery ho teny (toy ny ankamaroan' ny tsirinteny). Amin' ny famakafakana sasany dia heverina ho anisan' ny voambolana ihany koa ny kamban-teny sy ny karazana fomba fiteny sasany, ny teny matetika miaraka ary ny andian-teny hafa. Ny rakibolana dia andrana fitanisana araka ny filaharan' ny abidy, ny voambolan' ny fiteny iray; matetika anefa dia tsy tafiditra ao ny hasinteny mifatotra.
Ny teny ao amin' ny voambolana dia mandrafitra vondrona iray manontolo, izay mivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Ny fifandraisana misy eo amin' ny teny, amin' ny endriny ary indrindra amin' ny heviny, ary koa eo amin' ny dika maron' ny teny iray dia tena samihafa.
Ny haben' ny voambolana dia miovaova ary miankina manokana amin' ny fahasamihafan' ny sehatry ny fahalalana na haitao azony aseho. Miovaova be ihany koa ny haben' ny voambolana fantatra na ampiasain' ny tsirairay, miankina amin' ny tontolo iainana sy amin' ny tantara ary ny toe-javatra iainana. Ny fahasamihafan' ny voambolana, fototra matetika, amin' ny fiteny samihafa, dia miteraka olana lehibe amin' ny fandikan-teny, izay tsy misy vahaolana ankapobeny.
Ny teny vaovao dia azo foronina amin' ny fiteny rehetra, araka ny fomba samihafa, ary moramora na sarotsarotra kokoa, arakaraka ny fiteny. Mifanohitra amin' izany, ny teny dia manjavona, na soloina na tsia amin' ny heviny. Ny teny koa dia miova dika araka ny vanim-potoana, indraindray amin' ny fomba mahery vaika, mandritra ny fivoaran' ny kolontsaina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Voambolana&oldid=1041591"
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2021 amin'ny 15:32 ity pejy ity.